ကမ္ဘာ့ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးများအကြောင်း(မော်မွန်) | Siyin Chin Baptist Church
၁၈၂၀ ခုနှစ်တွင် Joseph Smith သည် နယူးယောက်အထက်ပိုင်းပြည်နယ်ရှိ ယာတောတစ်ခုတွင် နေထိုင်အသက်ရှင်ပြီး ဘုရားတရားရိုသေကိုင်းရှိုင်းသော်လည်း ၀ိညာဉ်ရေးတွင်တွေဝေနေသော၊ ဇဝေဇ၀ါ ဖြစ်နေသော သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုခေတ်ထိုအချိန်တွင် အသင်းတော်များအချင်းချင်းကြား၌ သူမှန်သည်၊ ငါမှန်သည် ဟူ၍အကြီးအကျယ်ငြင်းခုန်နေကြသည်။ Joseph သည် ဧဖက် ၄း၅ (သခင်တပါး၊ ယုံကြည်ခြင်းတပါး၊ ဗတ္တိဇံ တပါး) ကိုစွဲကိုင်လျက် မည်သည့်အသင်းတော်သည် အမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်သည်ကို ဥာဏ်အလင်းပညာ နှင့် နားလည်နိုင်စွမ်းပေးပါရန် ဘုရားသခင်ထံရိုးသားစွာဆုတောင်းသည်ဟုဆိုသည်။ မော်မွန်တို့၏ ပြောဆိုချက်အရ Joseph ထံ ယေရှုခရစ်တော် ကိုယ်ထင်ပြပြီး မည်သည့်အသင်းတော်မှ မှန်ကန်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မည်သည့်အသင်းတော်တွင်မှ မ၀င်ရောက်ရန် မိန့်ကြားသွားသည်ဟုဆိုသည်။ ဆက်လက်၍ ခရစ်တော်က တမန်တော် ၁၂ ပါး မရှိတော့သည့် အချိန်မှစပြီး ကမ္ဘာပေါ်တွင် အခွင့်အာဏာရသော စစ်မှန်သည့်အသင်းတော်၊ စစ်မှန်သောအမှုတော်ဆောင် ဟူ၍မရှိတော့ကြောင်းမြွက်ဆိုသေးသည်ဟုဆိုသည်။
« Midangte sang nong it zaw ziam?
သခင်ယေရှုခရစ်တော်သည် မည်သူနည်း။? »